Les ruches secrètes sont alignées - Agir avec Madagascar
Milahatra ny tohotantely miafina
eny akaikin’ny vahin-danitra,
miaraka amin’ny ankany mazava.
Mitsentsefa avy any, ry tantelin’ny eritreritro,
ry tantely mielatra feo
eo amin’ny habakabaka mitoho-panginana ;
manitra johary aman-drivotra :
hotsentsenantsika amin’izany ny triatra rehetra
mampitohy amin’ny tabataban’ny fiainana.
Mivesara koa vovo-boninkazon-kintana
ho an’ny tanin’ ahitry ny tany ;
ary rahampitso, rahefa miala londo eo
ny raozy dian’ny tononkirako,
dia hanana voany avy eny an-danitra
sy famafin-kintana isika.
Chargez-vous aussi de pollen stellaire
nous aurons des cynorrhodons aériens
« Heritiana : « Sous le... L'OPERA DU BOUT DU MONDE... »